ဇန်နဝါရီလ 3, 2015 မှာ 8: 13 ညနေ
ငါ့ကိုရန်၎င်း၏အလွန်အသုံးဝင် ဦး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!!
နိုဝင်ဘာလ 20, 2014 မှာ 12: 06 ညနေ
ဒီ app ကိုသုံးပြီး WhatsApp vids နဲ့ pics တွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့်ငါသိချင်တာက .. ဒီ vics နှင့် pics ur pc ထဲမှာသိုလှောင်ထားတဲ့နေရာကိုဒါမှမဟုတ်ငါတို့ whatsapp server ပေါ်မှာသိုလှောင်တာလားဆိုတာကြည့်လို့ရမလား ??
စိုးလွင် ဦး says:
နိုဝင်ဘာလ 14, 2014 မှာ 5: 01 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 4, 2014 မှာ 9: 33 နံနက်
ငါ kindle fire HDX ကိုသုံးတယ်။ ငါ့ကို install လုပ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး
Connor W Williams က says:
နိုဝင်ဘာလ 1, 2014 မှာ 3: 06 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 1, 2014 မှာ 6: 54 နံနက်
အံ့သြစရာ !!!! ကျွန်ုပ်ဂိမ်းဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတည်းဖြတ်သည်။ .so … .th file သည်ဖွင့်ရန်အဆင်များ…။ သို့မဟုတ်သင်တည်းဖြတ်ချင်သည်၊ ဖွင့်ပါ၊ root လုပ်ပါ။
အောက်တိုဘာလ 27, 2014 မှာ 5: 43 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 9, 2014 မှာ 11: 07 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 24, 2014 မှာ 2: 12 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 24, 2014 မှာ 10: 49 နံနက်
က Xperia Z2
အောက်တိုဘာလ 20, 2014 မှာ 9: 34 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 18, 2014 မှာ 10: 04 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 3, 2014 မှာ 1: 13 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 27, 2014 မှာ 12: 17 နံနက်
ကျွန်ုပ်၏ system app ရှိ es ကိုဤ apk ဖြင့်အသစ်မွမ်းမံရန်ကြိုးစားပါ၊ သို့သော် install မလုပ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 26, 2014 မှာ 12: 25 နံနက်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ; ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်အဆင်ပြေပါသည် (4 android ဗားရှင်းနှင့်)
စက်တင်ဘာလ 25, 2014 မှာ 7: 45 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 9, 2014 မှာ 12: 41 ညနေ
htc အလိုဆန္ဒ 816 တွင်ထည့်သွင်းမထားပါ။ plz အကူအညီ
သြဂုတ်လ 25, 2014 မှာ 10: 35 နံနက်
ဇူလိုင်လ 24, 2014 မှာ 4: 20 နံနက်
wow !!! အရမ်းကောင်းတဲ့ app တစ်ခု !!!!!
ဒါပေမယ့် Es explorer ကနေငါ upload တင်လို့မရပါဘူး။ ဒီ option ကိုထပ်ထည့်သင့်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် developer ။
ဇူလိုင်လ 21, 2014 မှာ 8: 57 နံနက်
ဇူလိုင်လ 18, 2014 မှာ 4: 50 ညနေ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော် android tablet ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ ကြိုးစားပြီးဖွင့်တိုင်းအချိန်တိုင်းဖွင့်လို့မရဘူးလို့ထင်ရတယ်။ asap Neeed
ဇူလိုင်လ 22, 2014 မှာ 2: 07 ညနေ
plz သည်ဤ app ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင်၏ android ဖုန်းသည်ဗားရှင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ဒုတိယ၊ ur android version သည်သင့်လျော်ပါကထပ်မံတပ်ဆင်ပြီး plz restart လုပ်ပါ။ စနစ်တကျလည်ပတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် အကယ်၍ ၎င်းသည်ဤအရာကိုလည်း ပြုလုပ်၍ မရပါက ur phone မှ cache ပစ္စည်းများကိုပယ်ဖျက်ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလှည့်ကွက်များကိုကြိုးစားပြီးပြီးနောက် ur ဖုန်းသည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုမသုံးနိုင်ပါကသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ur ဖုန်းကိုစစ်ဆေးပါ။
ဇူလိုင်လ 3, 2014 မှာ 11: 05 နံနက်
ကောင်းတဲ့ app …။ ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဇူလိုင်လ 3, 2014 မှာ 10: 39 နံနက်
ကောင်းတဲ့ app …? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဇူလိုင်လ 2, 2014 မှာ 7: 54 ညနေ
ငါအရင်ကဒီ app ကိုသုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ... playstore မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ android အသစ်မှာ install လုပ်လို့မရတော့ဘူး။
ဇွန်လ 29, 2014 မှာ 2: 45 ညနေ
မနေ့ကငါ့ဖုန်း (ThL W300) တွင်ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ Hard Reset မလုပ်မီ ES Explorer (နောက်ဆုံးထုတ်) ကိုတပ်ဆင်ပြီးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ဒီနေ့ငါ Goolge Play & ဒီကနေ (APK ဖိုင်ဖြင့်) install လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့၊ ဒီပရိုဂရမ်နှစ်ခုလုံးမှာ install မထားဘူး။
APK ဖြင့်ကြိုးစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အား install လုပ်ထားခြင်းမရှိသည်ကိုသာပြောရုံသာမကဘာမှမပါ။ Google Play တွင်ဤသတင်းကိုကျွန်ုပ်ထံပို့ပါ။
"Codigo ကအမှားအယွင်းများ desconocido durante la instalacion de la aplicacion: * -24"
ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်းအမှား, ကုဒ်အမှား * -24
ငါအရာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပေမယ့် aplication ကို install လို့မရပါဘူး။
ဇူလိုင်လ 8, 2014 မှာ 6: 34 နံနက်
မနေ့ကကျွန်ုပ်၏ဖုန်းထဲ၌ hard reset ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ Hard reset မလုပ်မီကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည် ES Explorer (နောက်ဆုံးထုတ်) ကိုတပ်ဆင်ပြီးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။
“ အမှားအယွင်းကင်းသောအမှားအယွင်းများသည် * -24″ ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 1, 2015 မှာ 2: 44 နံနက်
ပထမ ဦး စွာ settings> application> all> google play> clear data> clearcache သို့ သွား၍ google framweork သို့ သွား၍ data နှင့် cache ကိုရှင်းပေးပါ။ :))
ဇွန်လ 28, 2014 မှာ 9: 08 ညနေ
ဇွန်လ 26, 2014 မှာ 1: 35 နံနက်
ဗုဒ္ဓ ၀ ိပ joy နာတရား says:
ဇွန်လ 22, 2014 မှာ 4: 12 ညနေ
ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံး app ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဇွန်လ 21, 2014 မှာ 7: 00 ညနေ
ဟေး admin ကိုယ့်ဒီ softwar.plz ပြproblemနာကို install လုပ်နေတာငါမဆိုလမ်းကြကုန်အံ့
Dbanik ရွိုင်း says:
ဇွန်လ 11, 2014 မှာ 2: 32 ညနေ
ဇွန်လ 9, 2014 မှာ 6: 59 နံနက်
Nice app ။ Plz အများကြီး applications များထည့်ပါ
« Previous 123456နောက်တစ်ခု "
Phone Cleaner - ကျွန်ုပ်၏ Android & Fast ...